kwaChirere: The longest Shona novel!
Posted by kwaChirere at 7:39 AM
Unknown November 4, 2014 at 5:54 AM
Mutauro wedu, tsika nemagariro edu nenhorowondo yedu zvavakupfukutwa neguva. Zvavakuda nyanzvi dzakasimba kuzvimutsidzira. Ndinopa kutenda kukuru kuwana vanamazvikokota vakadai saanaKusema, Chirere,Musayemura tisingakanganwi magoko ekunyora chiShona akaita saana Mutsvairo, Chakaipa, Hamutyinei nevamwe vanozvipira kuita basa rakanaka kudai. Shuviro iripakuti dai zvakwanisika pawanikwa pwere dzitange kutevedza matsimba enyu kuitira kufambira mberi kwebasa rakakosha rikadai.